Home Wararka Gudaha Gaas: Markii aan xilka waayey ayuu miyirka ii soo laabtay
Gaas: Markii aan xilka waayey ayuu miyirka ii soo laabtay
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi siiyay BBC ayaa sheegay in siyaasiga marka uu xil u tartamayo uusan miyir qabin, taasi oo horseeda in xiligaas uu seego tallooyin muhiim u ah.
Cabdiweli Gaas oo sidoo kale hore usoo noqday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in siyaasadda Soomaaliya ay tahay sida khamaarka oo kale.
“Nasteexada ugu fiican haddii lagu siiyo xitaa ma qaadanaysid oo taada ayaa kuu cad, dadku iyaga oo u jeeda inaysan guulaysanayn, xitaa mararka qaarkood adiga oo markaad xisaabtanto ujeeda in aad guul daraysanayso ayaad kusii adkaysaneynaa, marka siyaasaddu waa khamaar,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu ka sheekeeyay sida uu xaalkiisu noqday markii uu labo jeer ku guul daraystay xil uu u tartamayay, kuwaasi oo kala ahaa Madaxweynaha Soomaaliya iyo Puntland.
“Runtii waa iga dhab labada xilba markaan waayey ayuu miyirku ii soo laabtay, horta fiiri qofka marka uu tartan ku jiro miyir ma leh sow ma ogid.”
Gaas ayaa ugu dambeyntiina mar wax laga weydiiyay xilalka sare uu soo qabtay ayaa sheegay in tii Ra’iisul Wasaaraha ay aheyd shaqo fudud, marka loo eego shanti sano ee uu madaxweynaha ka ahaa Puntland.
“Waxaan ahaa nin reerkiisa ku dhex jira, anigu waxaan idhaahadaa horta siyaasadda Soomaalidu waa dabdamis, mar kasta waxaad ku dhex jirtaa xaalad dab damis ah, labaduba sidaas ayey ahaayeen, balse aniga tii Ra’iisul wasaaraha ayaa ii shaqo fududeyd
Previous article13-ka Xiddig Ee Isaga Tagi Doona Liverpool Suuqa Xagaaga, Mane Ayaa Hogaaminaya
Next articleDaawo: Madaxweyne Xasan oo shaaciyay qorshe uu u tagay Dhuusamareeb
Daawo: Khudbadda Abiy Ahmed oo noqotay tan ugu saameynta badan +...
Olena Zelenska: Xaaska madaxweynaha Ukraine oo shaacisay wixii ninkeeda kala qabsaday...